Ultimaker Cura: ngwa magburu onwe iji kwadebe ụdị maka mbipụta 3D | Site na Linux
Taa 3D ebi akwụkwọ ka mfe inweta N'ihi eziokwu ahụ bụ na e nwere ụdị ọnụahịa enwere ike ịnweta ma nwee nke anyị nwere ike ịnwa ịmatakwu banyere ọrụ ha ma nwee ike ịgba onwe anyị ume ka anyị mụta ịmepụta ụdị nke 3D.
Mana maka nke a, anyị chọrọ ngwa ahụ nyere anyị aka kee ha na n'isiokwu a anyá »‹ na-aga ikwu banyere a nhọrọ magburu onwe ya nke nwere aha "Ultimaker Cura".
1 Banyere Ultimaker Cura
2 Esi wụnye Ultimaker Cura na Linux?
Banyere Ultimaker Cura
Nke a bụ ngwa emere maka ndị na-ebi akwụkwọ 3D, nke ị nwere ike gbanwee ihe nbipụta akwụkwọ wee gbanwee ha na koodu G. Ọ bụ David Braan kere ya, onye ga - arụ ọrụ maka obere oge maka Ultimaker, ụlọ ọrụ raara nye nhazi na imepụta 3D ndị na-ebi akwụkwọ.
Iji mee ka ngwanrọ ahụ nọgide na-enwe, ọ dị n'okpuru ikikere LGPLv3. A na-akwado mmepe ahụ na GitHub. The software na-eji ihe karịrị otu nde ndị ọrụ n'ụwa nile na bụ otu n'ime ndị kasị ọtụtụ ebe ada 3D ebi akwụkwọ software na 3D na-ebi akwụkwọ.
Onye na-eme Cura se ji ịnye eserese eserese iji kwadebe ụdị maka ibi akwụkwọ 3D, Kedu Ọ na-gbanwee dị ka ihe nlereanya na ihe omume na-ekpebi dịruru ná njọ nke 3D ngwa nbipute n'oge usoro nhazi nke usoro ọ bụla.
N'okwu kachasị mfe, O zuru ezu ibubata ihe nlereanya na otu n'ime usoro nkwado (STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG), họrọ ọsọ na ntọala dị mma, ma nyefee ọrụ mbipụta.
Enwere nkwụnye maka ntinye na SolidWorks, Siemens NX, Autodesk Inventor, na usoro CAD ndị ọzọ. A na-eji engine CuraEngine atụgharị ihe atụ 3D n'ime usoro nkuzi ihe nbipute 3D.
N'ime njirimara ndị bụ isi Ultimaker Cura gosipụtara ihe ndị a:
Cross-ikpo okwu na-emeghe iyi software, dị kpamkpam n'efu
Ọ nwere ihe abụọ na ụdị ojiji; Ọnọdụ akwadoro ma ọ bụ jiri ọnọdụ omenala hazie ihe karịrị 300 ntọala, maka njikwa kachasị
Njirimara ahazi profaịlụ, nke na-eme ngwaike na ngwungwu ihe dị mfe na ngwa ngwa, ma nweta ntụkwasị obi, nsonaazụ ọkachamara
Nkwado ozugbo maka ụdị faịlụ STL, OBJ, X3D na 3MF
Ike iji gbasaa ọrụ ya na mgbakwunye
Ikike ike ijikwa otu ma ọ bụ karịa netwọkụ nwere ike iru ndị na-ebipụta Ultimaker site na otu interface
Ugbu a sọftụwia dị na ụdị ya 4.6.1 nke bụ ihu ọma ihe mberede update maka mbipute 4.6 na ọ na-atụpụta profaịlụ ọkọlọtọ ọhụrụ nke na-agbanwezi mgbanwe ahụ na-echebara iji ihe ndị dị ka polycarbonate, naịlọn, CPE (polystyrene) na CPE +.
Na mgbakwunye na nke interface na-enye ihe ngosi nke nọ n'ọrụ n'ihendesịta maka post-nhazi na gbakwunye ntọala iji gbasaa oghere niile site na ịgbakwunye ntụpọ na akwa ọ bụla, na-enye gị ohere iji aka gị bulie ma ọ bụ belata oghere iji kwụọ ụgwọ maka ịgbasawanye. Na windo nyocha, a na-agbakwunye ike ịme ihe inyeaka.
Esi wụnye Ultimaker Cura na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye ngwa a na sistemụ ha, ha nwere ike ịme ya site na isoro ntuziaka anyị kesara n'okpuru.
Ohaneze maka Linux, ndị mmepe nke Cura nye anyị faịlụ AppImage nke anyi nwere ike inweta site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ngwa ahụ. Njikọ bụ nke a.
Ma ọ bụ maka ndị na-ahọrọ iji ọnụ, ha nwere ike ịnweta ngwugwu site na iji kọmputa ede iwu na-esonụ:
Mgbe nbudata ngwugwu anyị ga-enye gị ikike igbu. Anyị nwere ike ime nke a site na ịpị nke abụọ na ngwugwu ma na mpaghara menu anyị na-aga nhọrọ nhọrọ. Na windo emepere, anyị na-etinye onwe anyị na ikikere taabụ ma ọ bụ na ngalaba "ikikere" (nke a dịgasị obere n'etiti gburugburu desktọọpụ) anyị ga-pịa igbe "ogbugbu".
Ma ọ bụ site na ọnụ anyị nwere ike inye ikikere site na ịme iwu ndị a:
Na voila, ugbu a, anyị nwere ike ịgba ọsọ site na ịpị faịlụ abụọ ma ọ bụ site na njedebe na iwu ahụ:
N'ikpeazụ, n'ihe banyere Arch Linux ma ọ bụ nkwekọrịta, Anyị nwere ike iwunye ngwa ahụ ozugbo site na Arch Linux (ọ bụ ezie na ụdị a bụ nke ochie). Iji mee nke a anyị ga-pịnye:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ultimaker Cura: ngwa dị mma iji kwadebe ụdị maka mbipụta 3D
You ma nke ngwa ọ bụla maka simulating linux ma maka cnc?